‘कोहीसँग पनि मेरो प्रतिस्पर्धा छैन’ : नाजिर हुसेन « Ramailo छ
‘कोहीसँग पनि मेरो प्रतिस्पर्धा छैन’ : नाजिर हुसेन
प्रकाशित मिति : Mar 14, 2018
समय : 5:04 pm
कलाकार नाजिर हुसेनले आफ्नो प्रतिस्पर्धा अरु कुनै कलाकारसँग नरहेको बताएका छन् । आफ्नो काम गर्ने स्टाइल छुट्टै रहेको बताउँदै नाजिरले अरु कलाकारसँग आफ्नो कुनै पनि किसिमको प्रतिस्पर्धा नभएको बताए हुन् । यो भिडियो हेर्नुस् :
फिल्म ‘मंगलम’ हेरेपछि नयाक पुष्प खड्कालाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्नमा नाजिरले त्यस प्रकारको उत्तर दिएका छन् । पुष्पले ‘मंगलम’मा गरेको अभिनयको यतिबेला चारैतिर प्रशंसा भैरहेको छ । नवल नेपाल निर्देशित फिल्ममा पुष्प,नायिका शिल्पा पोखरेल र मिथिला शर्माको मुख्य भूमिका छ ।
थिएटरबाट फिचर फिल्ममा आएका नाजिर स्क्रिप्टको पात्रलाई पर्दामा उतार्न हदैसम्मको मिहेनत गर्दछन् । डेव्यु फिल्म ‘होस्टल रिटन्र्स’ होस् या ‘राज्जा रानी’ ! नाजिरको हरेक फिल्ममा अभिनयको प्रशंसा हुनेगर्दछ । साम्राज्ञी, आकाश श्रेष्ठ र नाजिरको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘तिमी सँग’ चैत २३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।